Maamulka Shabakada Wararka Ee Marsamedia Waxay Hambalyo Meher u Diraysa Liibaan Cashuur Iyo Marwadiisa | Marsa News
Maamulka Shabakada Wararka Ee Marsamedia Waxay Hambalyo Meher u Diraysa Liibaan Cashuur Iyo Marwadiisa
November 22, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Maamulka iyo guud ahaan hawlwadeenada shabakada wararka ee Marsanews.com waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinaysa Meherka Liibaam Omar Cashuur Iyo Hodan Mohamed Aadan oo maanta ka dhacay magaalada hargaysa hotel Maansoor.
Hambalyada lamaanaha ku soo biiray nolosha qoysnimo waxaan markale leenahay hambalyo iyo bogaadin, sidoo kale waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inay noqdo qoyskii isku raaga ee ubad khayr qaba eebe kala siiyo.
Dhiska Nolosha Guud Iyo Dhidib Waxa u ahaa Guur.
Noqda kuwii lagu farxo ee rayrayn ku waara guurkiinu guurkhayr rabi haka yeelo ayaanu leenahay, lamaanaha Liibaan iyo marwadiisa Hodan oo haatan nolosha qoysnimada wadaaga ayaanu hambalyada meherkooda kula wadaagaynaa farxad iyo raynrayn aanu leenahay.
Reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jiree nabad gala allahayoow idinka yeel, Hambalyo Hambalyo, Hambalyo